Ho hatanjahana ianareo ary koa hahazo fanentanam-panahy hamantarana ny fetra sy ny fahafahanareo manompo.
Feno fankasitrahana aho amin’ny fiarahako aminareo eto anio hariva. Nandroso lasa vondron’ ny rahavavy, izay faritan’ny renin’ ny Mpaminany Joseph Smith, i Lucy Mack Smith amin’ireto teny ireto, ireo vehivavin’ ny Fiangonan’ i Jesoa Kristy: “Tokony hifankatia isika, hifampiahy, hifanohana ary handray fampianarana, mba hahafahantsika rehetra hiara-hipetraka any an-danitra.”1
Misy lafin-javatra telo ao anatin’izany famaritana miavaka izany izay mikasika ireo zavatra takiana mifandray amin’ny toetry ny fahasambarana miaraka amin’Andriamanitra. Ny iray dia mifampiahy. Ny iray dia mifampianatra sy ampianarina. Ary ny fahatelo dia ny miara-mipetraka miaraka amin’Andriamanitra.
Ny tanjoko anio hariva dia ny hanampy anareo hahatsapa ny fiderana sy fankasitrahana avy amin’ Andriamanitra noho ny zavatra izay efa nataonareo mba hifanampiana eo amin’ny fanatratrarana izany tanjona ambony dia ambony izany. Ary, ny tanjoko faharoa dia ny hamariparitra ny sasantsasany amin’ ireo zavatra izay mbola ho avy ao anatin’ny asa fanompoana iarahanareo manao.
Nanaiky ny antson’ ny Tompo mba hanamaivana ny fahorian’ ny hafa ianareo tahaka ny nataon’ ireo rahavavy tamin’ ny andro taloha. Nangataka ireo Olomasina handeha hamonjy ireo andian-tsarety tarihin-tanana izay nihitsoka tany amin’ ny tendrombohitra rakotry ny ranomandry ny mpaminany Brigham Young tamin’ ny 1856. Toy izao no nolazainy tamin’ny mpikambana nandritra ny fihaonamben’ ny Fiangonana tao anatin’izany fotoam-pahasahiranana izany: “Tsy hamonjy na dia fanahy iray any amin’ ny fanjakana selestialin’ Andriamanitra ny finoanareo, ny fivavahanareo, sy ny asa fitorianareo, raha tsy manatanteraka ity fitsipika izay ampianariko anareo izao ity ianareo. Mandehana ary ento aty ireo olona any amin’ ny lohasaha ireo, ary karakarao tsara ireo zavatra izay antsointsika hoe ara-nofo, … fa raha tsy izany dia zava-poana ny finoanareo.”2
An-jatony maro ireo vehivavy teto Utah no namaly ny antso. Na dia tao anatin’ ny fahantrany aza izy ireo dia nameno ireo sarety tamin’ ny zavatra izay azony nangonina sy ireo zavatra rehetra azon’izy ireo nangonina avy tany amin’ny hafa mba hanampiana ireo tao anatin’ ny fahasahiranana. Nanoratra toy izao ny iray tamin’ ireo rahavavy